Qeerroon Amboo ajjeechaa ummata keenya Wallagga ,Gujii,Booranaa fi Walloo irratti Yaroo Ammaa raawwachaa jiru Akka dhaabbatu Mootummaa dulloomee tortoraa Abbaa irree akekkachiisan. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQeerroon Amboo ajjeechaa ummata keenya Wallagga ,Gujii,Booranaa fi Walloo irratti Yaroo Ammaa raawwachaa jiru Akka dhaabbatu Mootummaa dulloomee tortoraa Abbaa irree akekkachiisan.
Qabsoon Qeerroon haarsaa itti kaaffalaa turan oromiyaa jennata lafa irraa gochuuf malee irraa deebii RIB kaleessa haaloo nu irraa qabu carraa nageenya eegsisuu tti fayyadamee haaloo ykn jibba oromoo irraa qaban akka nu bahataniif miti.Haaloo isaanis oromoo irratti bahachaa jiru.
Miidhaan kamuu ilmaan oromoo irra gahu Daangaa malee nu ilaallata.
Ta’e jedhanii Gargar nu qooduun oromiyaa Dirree waraanaa gochaa jiru.
Dulli obbolaa keenya Wallagga ,Gujii ,oromoota Walloo irratti gaggeeffamaa jiru Atattamaan dhabbachuu qaba. Nuti oromoo dha.Olola Opdo fi saamtotaa oromiyaa lagaan qooduun dabaree dabareen wal ficcisiisaa jiran dura Ni dhaabbanna. Oromoon lagaa amantaan wal Hin qoodu.Nuti tokko.Ilmaan abbaa tokkoo ti.Ajjeechaa fi Dararamni isaan irra gahu dhaabbatee warreen badii kana raawwachaa jiran seeratti haa dhiyaatan.
Diina oromoo addaan qoodee diiguuf toftaa baasee ilmaan oromoo lafa irraa fixaa jiru oromoon hundi tokkummaan waliin dura dhaabbanna.
Gaafa tokkummaan dhaabbanne diinni nu dura Hin dhaabbanne.Gaafa Nuti lagaan wal qoodnu Oromoon tuffatamee akka hoola faasigaa Guyyaa Guyyaan mana isaaniitti deemanii RIB tiin qalamaa jiru.
Waliin haa dhaabbannu.Waliif haa tumsinu.Gochi duguuggaa sanyii lammii keenya nagaa Wallagga ,Gujii,Boorana,Walloo irratti RIB raawwatamaa jiru Atattamaan haa dhabbatu.
Ummanni keenya wallaalee miti; obsaa dha.
Sirni kun duraanis Oromoo hidhaa, ukkaamsaa fi ajjeesaa ture; sirnuma kanatu, deebi’ee Oromoo akka bilisoomsetti dhaadachuu eegale. Kan sobu hin qaana’u, akkuma jedhamu, bakka sianaii qaanofnee dhiifne; hayyee jennees obsine. Oolee otuu hin buliin ilaalchaa fi amala keessa ture sanatti deebi’e.; sirnichi hidhaa fi ukkaamsaa eegale; sana biras darbee amma kunoo, dararaa fi ajjaaechaa ifaan ifatti raawwachuu jalqabeera.
Amma falli qabnu, obsa keenyatti daangaa gochuu dha; ummanni keenya ni obse malee, wallaalee miti; obsi kun immoo yeroon itti dhumatu ni jira. Hireen nu dura jiru, otuu obsinuu dhumuu moo, qabsoo keenya itti fufnee wareegama malchiisu baasnee bakka yaadne gahuu dha. Falli filatamaa, nuti qabnu, qabsoo keenya itti fufuu dha; qabsoo keenyaan sirna nu hidhu, ukkkaamsu, dararuu fi ajjeesu ofirraa kaasuu dha; obsi keenya daangaa horachuu qaba!!
Waraanni mootummaa Abiy Fulbaana 27/2019 ummata ayyaana gubaa(masqalaa) ayyaaneffatee galaa jiru irratti dhukaasa banuun lama ajjeesee tokko madeesse. Oduun nu gahe akak ibsutti, ajjeecha akanaan abbaa fi ilmi lubbuun darbe: Obbo Jijoo Tolaa fi Dargaggoo Abdii Jijoo ti.
Haleellaan kanaan Obbo Habtaamuu Addaamuu harka irra madaa’uun beekameera.
(SBO – Fulbaana 28,2019) Haala Gujii keessaa irratti gaaffii fi deebii Tv.n ONN jiraataa godinichaa waliin godhe dhihootti eeggadhaa.
ONN irraa kan fudhatameSagalee Bilisummaa Oromoo
Midhaan qotuu eenyutu uummata dhorke? Dararaan gaggeeffamaa jiru eenyuuni dha? Kijiba dhiisaatii warra rakkatee himatu irraa dhaga’aa. Finfinnee ciqilfatanii ciisanii akka tuttufan miti dubbiin. #Kisaaraa
Sheekoo Baatii Sadii: Kijiba Habashaa jalaa baraniin ABOtti duuluuf haalduree tolfatan; afuuftuun gandaa immoo kana fuutee odeessiti. Lammii Beenyaa akka armaan gadiitti tolchee barreesse.
“Baatii sadii gidduutti mootummaa dhuunfanna!” Himannaa kana MM Abiyyii Ahmadtu ABO ittiin loluuf miidiyaatti bahee dubbate. ABOn eessatti, yoom akkas jedhe kan jedhuuf namn qorannoo gaggeesse, miidiyaan ABOs ta’e MM qore hin turre. Haasaa MM Abiy kana xiqqaa guddaan dhugaa jedhee fudhate. Nama gaddisiisa. Akkamittiin jechi kun Oslo hin mirkaneeffatiin callisee fudhatama? Eenyu kan ABO keessaa mootummaa kana baatii sadii gidduutti dhuunfanna, irra dhangalaana jedhee dhaadate? Jaal Daawudii? Jaal Abdiidhaa? Jaal Marroodhaa? Yoom akkas jedhan? Walgahii moo miidiyaan ibsatan? Dubbii kijibaa MM Abiyyiin tarkaanfii waraanaa itti deemuuf jedhu sana seera qabeessa taasifachuuf dubbate sana dhugaa godhanii fudhachuun wal nu taajjabsiisa.
FYI: Yeroo MM Abiyyiin kana dubbate hoogganni ABO Finfinnee jiru waajjira keessa qubatuyyuu dhabee rakkataa ture. Kijibni garuu hin dhaabbanne. Fakkeenyaaf: “Isaanumti gad haa dhufan. Yeroo isheen lama taatee dhuftu, yeroo isheen ummata dubbistu asumatti hambisna,” nuun jedhan. MM Abiyyiin Abbootii Gadaa fi Maanguddoota biyyaa walitti qabee himate.
– “Baatii sadii Gidduutti mootummaa dhuunfanna,” jedhanii dhaadatan. kanas MM Abiyyiitu walgahii hayyootaa tokkorratti dubbate. Ammaaf kan hin maxxansine kijiba heddutu jira. Kanaaf, namoonni keenya dubbii balance godhachuuf himannaa kana dhugaa gootanii fudhattan isinis kijiba biraa hanqaaqaa jirtu jedheen yaada. Dubbii qoradhaa, miidiyaanis akka qulqulleessu godhaa, waan qabatamaa ummataan gahaa.”